Xiaomi Mi A3: Xiaomi Mi A2 | နှင့်အဓိကကွာခြားချက်များ Androidsis
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကသင်တို့အားလုံးကိုသင်ပြသခဲ့သည် Xiaomi Mi A3 အသေးစိတ်အချက်အလက်များ, Mi A2 ကိုအောင်မြင်ရန်ကြွလာသည့်အာရှထုတ်လုပ်သူမှဖုန်းအသစ်။ Android One ပါတဲ့ terminal တစ်ခုပါ။ သို့သော်၎င်း၏ယခင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မည်သည့်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသနည်း။ Xiaomi Mi A3 ကိုဝယ်သင့်သလား၊ ဒါမှမဟုတ် Xiaomi Mi A2 ရဲ့စျေးနှုန်းကျဆင်းမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူတာလား။
ဒီသံသယတွေအားလုံးကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကမင်းကိုခေါ်လာတယ် Xiaomi Mi A3 နှင့် Xiaomi Mi A2 နှိုင်းယှဉ်ချက်မည်သည့်နေရာတွင် ၀ ယ်ယူသင့်သည်ကိုသိရန်၊ မော်ဒယ်နှစ်မျိုးလုံး၏ဒီဇိုင်း၊ စက်ပစ္စည်းနှင့်စျေးနှုန်းတို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်မြင်နိုင်လိမ့်မည်။
2 Xiaomi Mi A3 ၏ကင်မရာသည် Mi A2 ထက်ပိုကောင်းသည်
3 Mi A3 မျက်နှာပြင်သည် Mi A2 ထက်ဆိုးသည်
အကြီးအထဲကတစ်ခု Mi A3 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Xiaomi Mi A2 ၏သတင်း ကျနော်တို့က၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုရှာပါ။ ထို့အပြင် terminal နှစ်ခုစလုံးသည်ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးကိုအလွန်ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်ရှိစေရန်အရည်အသွေးအပြီးသတ်မှုများပြုလုပ်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသော်လည်းဖုန်း၏ရှေ့မျက်နှာစာသည်ယခင်မော်ဒယ်လ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကခြားနားမှုရှိသည်။
ထို့အပြင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဘောင်များပေါ်တွင်လောင်းထားသော Xiaomi Mi A2 နှင့်မတူသည်မှာ Xiaomi Mi A3 ကိစ္စတွင်၎င်းတို့သည်မော်ဒယ်များစွာကိုဖြစ်စေရန်ပိုမိုတင်းကျပ်သောဒီဇိုင်းကိုလောင်းရန်ပိုနှစ်သက်သည်။ ဗေဒခေတ်သစ်။ ထိုအရေတစ်စက်၏ပုံစံအတွက်ထစ်ပြောပါ။ ၎င်းသည်အထက်ဘောင်ကိုဖယ်ရှားပြီးအနည်းဆုံး terminal ၏ estetics ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, နောက်သို့ရွေ့လျားကျနော်တို့အသစ်သော: ထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုရှာပါ Xiaomi Mi A3 သည်သုံးဆမှန်ဘီလူးစနစ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကင်မရာကိုတပ်ဆင်သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ယခင်မော်ဒယ် dual- မှန်ဘီလူး system ကိုပေးထားပါတယ်။ ဒါကတစ် ဦး ဗေဒဒြပ်စင်လား? မဟုတ်ဘူး၊ မှန်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီထက်ပိုပြီးခေတ်မီတဲ့ဖုန်းနဲ့သင်ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်လုပ်ထားတယ်။
Xiaomi Mi A3 ၏ကင်မရာသည် Mi A2 ထက်ပိုကောင်းသည်
ထို့အပြင်သုံးဆကင်မရာစနစ်ရှိခြင်းဖြင့် Xiaomi Mi A3 ၏ဓာတ်ပုံအပိုင်း Xiaomi Mi A2 ထက်ပိုကောင်းပါတယ်။ စတင်ရန်၊ ၎င်းသည်ပထမ ၄၈ megapixel အာရုံခံကိရိယာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောစနစ်တစ်ခုနှင့် ၈ မီဂါပစ်ဇယ်လ်အကျယ်ထောင့်တို့နှင့်အတူအဖွဲ့၏ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တတိယ ၂ မဂ္ဂါပစ်ဇယ်လ်အာရုံခံကိရိယာသည်နက်ရှိုင်းမှုကိုဖမ်းယူရန်တာဝန်ရှိသည်။ ငါတို့ဖမ်းတော့မယ်။ ဤနည်းအားဖြင့် bokeh သို့မဟုတ်မှုန်ဝါးအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်များစွာပိုမိုအောင်မြင်လိမ့်မည်။
အဲဒီအစား Xiaomi က Mi A2, ဒုတိယ 20 megapixel မှန်ဘီလူးနှင့်အတူပထမ 12 megapixel အာရုံခံကိရိယာပေါ်တွင်လောင်းပါ။ ခြားနားချက်ကမှတ်သားလောက်စရာကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ Xiaomi Mi A3 ၏ရှေ့ကင်မရာတွင်ယခု ၃၂ megapixels ရှိသည့် Mi A32 နှင့်၎င်း၏2megapixels ၏ selfie ကင်မရာနှင့်ခြားနားမှုရှိခြင်းကြောင့်မော်ဒယ်သစ်သည်ကားကိုနှစ်သက်သူများအားနှစ်သက်စေသည်။
Mi A3 မျက်နှာပြင်သည် Mi A2 ထက်ဆိုးသည်
ဒီအတွက်ဖုန်း၏ကြီးစွာသောစိတ်ပျက်စရာတစ်ခုမှာ Xiaomi Mi A3 နှင့် Xiaomi Mi A2 နှိုင်းယှဉ်ချက် ကျနော်တို့ကမာလ်တီမီဒီယာအပိုင်း၌ကြည့်ပါ။ ထို့အပြင် Xiaomi Mi A2 သည် Full HD + resolution သို့ရောက်ရှိနိုင်သော IPS panel မှဖွဲ့စည်းထားသော ၅.၉၉ မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ယင်းအစား Xiaomi Mi A5.99 မျက်နှာပြင်သည် ၆.၁ လက်မ AMOLED panel ရှိပြီး၎င်း၏ resolution မှာ HD + ဖြစ်သည်။
ထုတ်လုပ်သူ၏ terminal မျက်နှာပြင်၏ resolution ကိုလျှော့ချရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်မှာသူတို့သည်ဘက်ထရီကိုပိုမိုကြာရှည်ခံစေလိုကြသည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလျှော့ချလိုက်တဲ့အတွက် ၀ မ်းနည်းစရာပါ၊
Xiaomi Mi A2 ၏အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ၎င်း၏အလယ်အလတ်ဘက်ထရီဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ၃,၀၁၀ mAh သည်ပျမ်းမျှသုံးစွဲသူတိုင်းအတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုလုံလောက်စွာမပေးနိုင်ခဲ့ပေ။ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွက်ချက်သောကြီးမားသောအမှားတစ်ခု။ ဒါပေမယ့်ထုတ်လုပ်သူမှတ်ချက်ချသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် Xiaomi Mi A3.010 သည်3mAh ဘက်ထရီကိုတပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ယခင်မော်ဒယ်များထက်များစွာပိုမိုမြင့်မားသည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၎င်းသည်မျှော်လင့်ချက်များထက်ပိုမိုလိမ့်မည်။
နည်းပညာအရပြောရမယ်ဆိုရင် Mi A3 မှာပိုကောင်းတဲ့ processor ရှိတယ်ဆိုပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်တော့မော်ဒယ်နှစ်မျိုးစလုံးမှာမည်သည့်ဂိမ်းနှင့်အပလီကေးရှင်းကိုမှပြproblemနာမရှိဘဲရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်စွမ်းအားလုံလောက်သည်။ ဒီတော့ဘာဖုန်းဝယ်ရမလဲ Xiaomi Mi A3 သို့မဟုတ် Xaiomi Mi A2? ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် Mi A2 မျက်နှာပြင်ကသာလွန်ကောင်းမွန်ပေမယ့်ကျန်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကချိန်ခွင်လျှာကိုမော်ဒယ်အသစ်ရဲ့မျက်နှာသာပေးစေတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Xiaomi က » Xiaomi Mi A3 - Xiaomi Mi A2 နှင့်အဓိကကွာခြားချက်များဖြစ်သည်
သင့်ရဲ့ Dolce Gusto သောက်စရာကိုအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ